Sweet Melody in the Rain: January 2009
Dead Man & Living Man
- သေတဲ့လူနှင့် ရှင်တဲ့လူ
တနေ့ နေ့ 
တချိန်ချိန်မှာ တွေ့ ကြရတယ်။
ရှင်ရက်နဲ့မပျော်တဲ့လူ
ဘာများ .... တတ်နိုင်မှာမို့ လို့ လဲ။
Posted by Melody at 1:57 PM No comments:
- ကျွန်မ ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ အများကြီး။
၂) ဗိသုကာ ပညာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်
(ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆောက်ချင်လို့ )
၃) ဗေဒင်ဆရာမ ဖြစ်ချင်တယ်
(မပင်ပန်းဘဲနဲ့ပိုက်ဆံရတယ်ထင်လို့ )
၄) ကုန်စုံဆိုင်လေး ပိုင်ချင်တယ်
(ဈေးပေါပေါနဲ့အကုန်လုံး ၀ယ်လို့ ရစေချင်လို့ )
၅) ကြော့ကြော့မော့မော့လေးနဲ့လှလှပပလေး နေချင်တယ်
(လှပစေဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လို့ )
၆) အားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာ စေချင်တယ်
(အားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာအောင် မလုပ်ပေးနိုင်သေးလို့ )
၇) နှင်းဆီဥယျာဉ် ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်
(မြေကြီးက ရှားလွန်းလို့ )
၈) ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ ၀ယ်ချင်တယ်
(၀ယ်စရာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ )
၉) စတူဒီယို တစ်ခန်းလိုချင်တယ်။ ပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ ။
(ဆူညံရင် complain တက်ကြမှာပေါ့
ဘာမှလည်းဖြစ်မလာသေးဘူး ... :P
Posted by Melody at 11:12 AM 1 comment:
အာဏာရူးတဲ့လူတွေ ... အပြင်မှာနေပြီးတော့
မဟုတ်မခံတဲ့လူတွေ ... အထဲရောက်နေတာ
- လူငယ်တွေရဲ့ 
ငါ့အပြစ်လည်း ... မကင်းဘူး။
ငါသာရှေ့ နေဖြစ်ခဲ့ရင် ....
တရားခံဘက်က ရှေ့ နေလိုက်မိမှာ
အပြစ်လား ...... ??
Posted by Melody at 6:31 PM 1 comment:
My Love Says ....
- မုန့် မစားရဘူး
(MRT ထဲမှာ ဆိုရင်လေ)
(ကိုယ့်အိမ်အောက်မှာ ဆိုရင်တောင် .... complain တက်ကြမှာပေါ့)
(မူးပြီးမောင်းရင် ကားတိုက်မှာစိုးလို့ )
( သူ့ ကိုယ်သူ အသန့် ရှင်းဆုံး နိုင်ငံဆိုပဲ)
- ချစ်သူပြောတာ ထက်တောင်
FINE ပေးရမှာစိုးလို့........။
Posted by Melody at 12:30 PM No comments:
- တရုတ်နှစ်ကူးဆိုရင် အန်ပေါင်း (လို့ ခေါ်တဲ့ red packet - hongbao) ကရနေကြ။ ငယ်ငယ်လေးတုန်းကတော့ အဖေ၊အမေက ပေးတယ်။ ကြီးလာတော့ အလုပ်ကပေးတယ်။ အဓိက ကတော့ ပိုက်ဆံကို စာအိတ်ထဲ ထည့်ပြီးပေးတာပါ။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ပေးလဲမသိရတော့ (ကိုယ့်ကို ပေးတယ်ဆိုရင်ပဲ) thank you (ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်)
-2$ ပဲ ပေးတဲ့သူက ရှိသေးတယ်။ ဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ (2$ နဲ့ )။ မပေးရင်လည်း မပေးပါနဲ့ တော့လား။ ရထားတောင်စီးလို့ မရဘူး။ ကားစီးလို့ ရရင် ကံကောင်း။ မနှစ်ကတော့ အလုပ်က (10$ လား 12$ လားမသိ) ပေးတယ်။ ဒီနှစ်တော့ (6$) ပဲရတယ်။
- မောင်တွေ၊ ညီမတွေကို အန်ပေါင်း(30$ တန်သည်၊ 50$ တန်သည်) ပေးရတယ်။ ဒီလောက်ပေးမှ သူတို့ တွေ ၀ယ်ချင်တာ ၀ယ်လို့ ရမှာပေါ့။
- အင်း ... အမေကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ။ ၀င်ငွေမရှိဘူးဆိုပြီး အန်ပေါင်းမပေးဘူး။ ကိုယ့်ကျ ၀င်ငွေရှိတယ်ဆိုပြီး မောင်တွေ၊နှမတွေကို ပေးခိုင်းတယ်။ တရားလိုက်ပုံများဆိုတာ ....။
- တော်သေးလို့ .... CNY ပြီးမှ 12$ ထပ်ရလို့ ....။ :P
ပန်းပုဆရာနဲ့ တွေ့ ရင်
(လှပစွာ) တည်ထောင်နိုင်တဲ့ လူလက်ထဲ
ဘာလို့ မအပ်နိုင်ရတာလဲ ...။
မင်းတို့.... ငါတို့ .....
ကိုင်း .... ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ???
Posted by Melody at 4:11 PM No comments:
- ဆီးချိုဆိုတာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose level ဟာ ပုံမှန်ထက်မြင့်နေတာကို ခေါ်တာပါ။ ဆီးချိုမှာ type 1 နှင့် type2ဆိုပြီး (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ type 1 ဆိုတာက Insulin လို့ ခေါ်တဲ့ hormone တစ်မျိုးကို ခန္ဒာကိုယ်က မထုတ်ပေးနိုင် တာကိုခေါ်ပါတယ်။ Insulin ဆိုတာ glucose ကို ထိန်းပေးတဲ့ hormone တစ်မျိုးပါ။
- type2ဆိုတာကတော့ insulin အလုံအလောက်မရှိတာ (ဒါမှမဟုတ်) cells တွေက ရှိနေတဲ့ insulin တွေကို လျစ်လျုရှုနေတာကိုခေါ်ပါတယ်။ 95% သော ဆီးချိုသမားတွေဟာ type2ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။
- အ၀လွန်ခြင်းဟာ type2ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုဖြစ်တဲ့လူ တော်တော်များများဟာ အသက် (၅၅) နှစ်ကျော်မှဖြစ်ကြတာပါ။ ပြီးတော့ ဆီးချိုဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးထဲမှာ ဆီးချိုတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ ကိုယ့်ဆီမှာ ဆီးချိုဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေး (၂)ဆလောက်ရှိပါတယ်။
- ဆီးချိုဖြစ်တဲ့သူတွေဟာ ...
၁) မကြာမကြာ ရေငတ်ပါတယ်
၂) မကြာမကြာ ဗိုက်ဆာပါတယ်
၃) အလိုလိုနေရင်း ပင်ပန်းနေတတ်ပါတယ်
၄) အပေါ့ခဏခဏ သွားပါတယ်
၅) အမြင်အာရုံေ၀၀ါးတတ်ပါတယ်
၆) အနာတွေဖြစ်ရင် တော်ရုံနဲ့ မပျောက်ကင်းတတ်ပါဘူး
- လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ်ပေးခြင်း (အနည်းဆုံး လမ်းလျှောက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ဘီးစီးလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်) ဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်မှု လျော့နည်းစေ ပါတယ်။
Posted by Melody at 12:04 PM No comments:
- လူတိုင်း၊ လူတိုင်းက ကိုယ့်မွေးနေ့ ကို တခြားလူတွေက အသိအမှတ်ပြုပေးတာ လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူတွေဆီကပေါ့။ တကယ်လို့များ အသိအမှတ်မပြုကြဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမှန်း အသက်ကြီးတော့မှ နားလည်ခံစားမိတယ်။
- များသောအားဖြင့် လူတွေကတော်တော်အတ္တကြီးကြတယ်။ ကိုယ့်မွေးနေ့ ကိုပဲ အသိအမှတ် ပြုပေးတာ လိုချင်ကြပြီးတော့ သူများမွေးနေ့ ကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ 
၀န်လေးနေကြတယ်။ မေ့လျော့နေကြတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက ကိုယ့်မွေးနေ့ကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း မမျှော်လင့်ပဲ ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာ လဲဆိုတာ မသိကြဘူး။ ၀မ်းသာ တာထက်ပိုတဲ့ ကြည်နူးမှုလှိုင်းတံပိုးလေး လှုပ်ခတ်သွား တာကို ခံစားဖူးသူမှ သိမှာပါ။ ခံစားဖူးသူမှ နားလည်နိုင်မှာပါ။ ခံစားဖူးသူမှ ယုံကြည်နိုင် မှာပါ။
- အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့ အမျှ သူများမွေးနေ့ ကို အသိအမှတ်ပြုပေးရတာ မပျက်ကွက်ရအောင် ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အသိအမှတ် ပြုပေးချင်တယ်။ အသက်ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ် အသိအမှတ်ပြုပေးချင်တယ်။ ၀မ်းမြောက်
၀မ်းသာနဲ့သူတို့ ရဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပေးချင်တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး၊ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲ၊ခက်ခဲ မွေးနေ့ ကိုကြိုသိခဲ့မှတော့ ရင်ထဲက စေတနာနဲ့ ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကုန်ကုန်လုပ်ပေးချင်တယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ၀မ်းမြောက် မှုလေးရသွားစေချင်လို့ ပါ။
- ဒီနှစ်မကြုံရင်တောင် နောက်နှစ်ကို လုပ်ပေးလို့ ရသေးတယ်။ နောက်နှစ် မကြုံရင်တောင် နောက်တစ်နှစ်ကို လုပ်ပေးလို့ ရသေးတယ်။ ကိုယ်စေတနာ၊ မေတ္တာရှိတဲ့ လူတိုင်းကိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် ... အစားထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှူံးမှုကြီးတစ်ခုကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကနေ ရရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့မှ မရနိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရှူံးမှုကြီးပေါ့။
- မသိတတ်ခဲ့တဲ့ အသက်အရွယ်ကနေပြီး သိတတ်တဲ့ အသက်အရွယ်အထိ အမှတ်တမဲ့နေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်အတွက်လည်း နောင်တရလို့ မဆုံးဘူး။
ဘာလို့ များမေ့လျော့နေမိပါလိမ့်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ပေါင်းလည်း မနည်းဘူး။ တကယ်ဆိုရင် ... မဖြစ်သင့်ဘူး။ သူများတွေရဲ့မွေးနေ့ ကို အသိအမှတ်ပြုတာ မပျက်ကွက်အောင် ကြိုးစားနေရင်းက ကိုယ့်အချစ်ဆုံးလူရဲ့ 
မွေးနေ့ ကို (သိရဲ့ သားနဲ့ ) ဘာလို့ ပျက်ကွက်မိလဲ မသိ။
- ခုချိန်ကျမှ "ချစ်လှပါချေရဲ့..." လို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုနေပေမယ့် သိနိုင်တော့တာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်ဆို အတူတူနေခဲ့စဉ် တစ်လျှောက်လုံး ပြောပြသင့်တယ်။ ရင်ထဲကတောင်မကဘဲ နှုတ်ကဖွင့်ဟသင့်တယ်။ သိအောင်ရေရွတ်သင့်တယ်။
မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးစရာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ဘာတခုမှမရှိတောင် အနမ်းတခုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သသင့်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဖြစ်သင့်တာတွေ အများကြီးပါ။ မဖြစ်နိုင်တော့တာတွေလည်း အများကြီးပဲပေါ့။
- ဖြစ်မလာနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျမှ သတိရနေလို့ ကတော့ ကိုယ့်အတွက် သောကအပြင် ဘာများရနိုင်မှာမို့ လို့ လဲ။ အပိုလက်ဆောင်အဖြစ် ၀မ်းနည်းမှုမျက်ရည်တွေ စီးဆင်းလာရုံပေါ့။ သူများတွေကို ကြည့်ပြီး အားကျလာရုံပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆထက်တစ်ပိုး ၀မ်းနည်းလာရုံပေါ့။ ဒါတွေ၊ ဒါတွေကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀မ်းမနည်းအောင်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တွေကို အတိတ်ထဲကနေ ဆွဲမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပစ္စုပ္မန်ကို ဆွဲမပို့ နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါတောင်
အတိတ်ရဲ့ အနေအထားက ကိုယ့်အနားမှာ ရှိမနေသေးလို့ သာပဲ။ ရှိများရှိရင်တော့ ရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလား??
I Love You, Model
Baby Model : Moe Thanzin Cho
Myanmar Model : Sandi Myint Lwin
Myanmar Model : Chit Thu Wai
၀မ်းလျှောတာတော်တော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဆီမှာ ဖြစ်ရင်ပေါ့။ သူတို့လေးတွေဟာဝေဒနာကိုမပြောပြတတ်တော့ မိဘကအထူးဂရုစိုက်ပေးရပါတယ်။
၀မ်းလျှောတဲ့အခါ ကလေးငယ်တွေဟာ ခန္ခာကိုယ်ထဲ က ရေနဲ့ ဆား တော်တော်များများ ဆုံးရှုံးသွားလေ့ရှိပါတယ်။အထက်လှန်အောက်လျှော ဖြစ်ပြီဆိုရင်အသက်
အန္တရာယ်ထိအောင် စိုးရိမ်ရပါတယ်။
၀မ်းစလျှောပြီဆိုတာနဲ့နီးစပ်ရာ ဆေးခန်း (ဒါမှမဟုတ်) ဆရာဝန်ဆီသွားပါ။
ထမင်းရည်ကို ဆားလေးခပ်ပြီး တိုက်တာဟာ ၀မ်းလျှောတာကို သက်သာစေမယ့်
အလွယ်ကူဆုံး နဲ့ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Melody at 4:07 PM2comments:
- ဆံပင်မဖြူ၊ သွားမ ကျိူးသေးပေမယ့် မျက်စိကတော့ မှုန်နေပါပြီ ။ (အင်း ... ဆီးချိုကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့)
- သမီး (၅) ယောက် ၊ သား (၂) ယောက်ရှိတယ် ။ သမီး (၂) ယောက်ပဲအပျိုကြီး၊ ကျန်တာအိမ်ထောင်နဲ့ ။ သမီးအကြီးကမွေးတဲ့ မြေးမလေးနဲ့ပြီးတော့ အဘိုးကြီးနဲ့ဟိုး ... ခြောက်လွှာက တိုက်ခန်းလေးမှာ နေတယ်။
- ဒါတောင် အဘိုးကြီးက တခါတလေ (အမြဲတမ်းလိုလိုပါ) သူ့ သမီး (သူ့ အမျိုးသားက နိုင်ငံခြားမှာ) အိမ်မှာနေတယ်။ သူ့ မှာ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ဆိုတော့ မနိုင်ဘူးလေ။
- စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ... ။ အိမ်ကခြောက်တိခြောက်ချက်။ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကိုတောင် နေချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး။
- သားသမီးတွေနဲ့ သွားနေရအောင်ကလည်း သူတို့ မှာ အိမ်ထောင်နဲ့ ဆိုတော့ ယောက်ျားမျက်နှာ ၊ မိန်းမမျက်နှာက ကြည့်ရသေးတာပေါ့။ ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကျွေးဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့ မှာ သားသမီးတွေရှိရင်ပိုတောင် ဆိုးသေးတယ်။
- အပျိုကြီးသမီး(၁)ယောက်က နယ်ကသူ့ ညီမဆီမှာ ကလေးတွေကိုဝိုင်း ကြည့်ပေးနေတယ်။ နောက်(၁)ယောက် (အပျိုကြီး) က ၀န်ထမ်းဆိုတော့ နယ်မှာတာဝန် ကျနေတယ်။
- မြေးမလေးနဲ့ ပဲအတူတူနေရမလားအောက်မေ့ပါတယ် ... online သွားတက်ရတာနဲ့၊ guide သွားပြရတာနဲ့အိမ်မှာကိုမရှိဘူး။
- သမီးကြီးနဲ့ တော့ သွားနေချင်ပါရဲ့ ။ သူ့ မှာလည်း သူ့ သမီးနဲ့ ၊ သူ့ သားနဲ့ ၊ သူ့ မြေးနဲ့နိုင်ငံခြားမှာ။ မတွေ့ ဖူးသေးတဲ့မြစ်နဲ့ လည်း တွေ့ ချင်တယ်။ သမီးနဲ့မြေးနဲ့ကလည်းခေါ်ချင်တယ်။ သူ့ မှာကလည်း သူ့ သမီးလုပ်စာနဲ့ ပဲ (၂)ယောက်၊ (၃)ယောက် ထိုင်စားနေရတာဆိုတော့ .... ဒီကအဘွားကြီးပါသွားနေလိုက်လို့ကတော့ .... ဘယ်လိုလုပ်လွယ်မလဲ။
- ဒီကအဘွားကြီးလာဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးတောင် အဲဒီကနေ ပို့ ပေးနိုင်ပါ့မလား တောင်မသိ။
- တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပေါ်မှာ ထိုင်နေပြီး ဘာလုပ်နေရပါ့။
- Wishing you allaHappy New Year,
Hope you guys haveagood year,
Not as bad as last year,
Please don't drink beer,
May not be good for your career,
Learn from what you hear,
Use it as your gear,
So wanna ask you something dear,
Do you think I deserveacheer?
Reply me if you find it unclear,
Otherwise I might turn up like Britney Spear....
Haha happy new year folks.
Posted by Melody at 3:25 PM No comments:
Renoir: Young Girls at the Piano
Moe Win Aung : A Place in Bagan
Aung Kyaw Htet: Three Young Nuns Praying
Kyaw Soe : Kyaikkame beach